Isoftware Namathuluzi Angikwazanga Ukuphila Ngaphandle | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 25, i-2009 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 ULorraine Ball
Ukufunda Okuthunyelwe nguDoug kungenze ngacabanga ngazo zonke izicelo engincike kuzo njengengxenye yendlela engiqhuba ngayo ibhizinisi lami nempilo yami. Eziningana, iTungle neDropbox, uDoug usevele ushiwo. Kepha nalu uhlu lwabanye abambalwa ebengingacabangi ukuthi bangaphila ngaphandle:
Ama-WebNotes - Le yingxenye ebaluleke kakhulu yocwaningo lwami lwewebhu. Noma ngabe ngizama ukuthola imininingwane yephrojekthi yeklayenti, ugqozi lokuthunyelwe kwebhulogi, noma ukulandelela imiphumela yomkhankaso we-PR, amaWebNotes angivumela ukuthi ngithathe futhi ngihlele imininingwane ngama-post-it-notes nama-highlighters. Futhi ingxenye engcono kakhulu yithuluzi lokukhiqiza umbiko. Lapho sihlanganiswe ne-Alert ye-Google ezenzakalelayo, kubukeka sengathi sichithe amahora amaningi sisesha iwebhu futhi silungiselela umbiko ofingqiwe!
IkheliTwo - Ngaphezu kwebhuku lamakheli, leli ithuluzi le-CRM leqiniso. Ngisebenzise izisekelo eziningi zedatha eminyakeni edlule ukuphatha engixhumana nabo, i-Access (ngazakhela eyami, umfana wayeyile geeky), i-ACT ne-Outlook futhi ngithola ukuthi lokhu kungifanela kahle. Isekelwe kuwebhu, ngikwazi ukwabelana nabantu engixhumana nabo nethimba lami lonke. Singakwazi ukuphatha oxhumana nabo namaphrojekthi ngokwakhe ohlwini lwemisebenzi. Futhi, ngihamba kancane ngisuka ku-ConstantContact ngiya kuthuluzi le-imeyili le-AddressTwo. Noma kukhawulelwe kancane ekwakhiweni nasekubikeni kokubika, ngiyalithanda ikhono lokubuza isisekelo sedatha, ukukhomba iqembu elifanele kuphela, nokuletha umyalezo ofanele.
Ngiyalithanda nekhono lokuthumela i-imeyili ku-Addy ngamagama abantu engifuna ukubafaka kudatha yami noma ukwethula omunye komunye futhi uyayinakekela. (Yebo ngiyazi ukuthi akayena umuntu ngempela, kepha kwesinye isikhathi ungifezela okuningi kunesisebenzi sangempela, ngakho-ke kunzima ukungamcabangi njengomuntu)
Ukuziphendulela - Abantu abangazi kahle bakuthola kumnandi ngendlela emangalisayo ukuthi ngiphila ngokubhala, ngoba angiyena umbhali. Ngiyisikhulumi! Njengokhulumayo, nganginomqondo wokuthi ngingeza ama-podcast ku- ibhulogi yami kanye ne-Audacity ikwentile loko. Ngesikhathi esincane kakhulu esitshaliwe, sengisukile ku-novice ngaya ekuhleleni pro. Angikwazi ukuhlela ngisho nokuphazanyiswa okuncane kwe-um, er noma kocingo. (Noma kwesinye isikhathi ngibashiya bangene, ngoba nje bengeza uhlamvu).
Ngiyalithanda iqiniso lokuthi ama-podcast masonto onke anciphisa inani lokubhala okufanele ngikwenze, kepha kunezinye izinzuzo futhi. Izinhlelo zinginika izaba zokumema umngani isikhathi sokuqopha nokuvakasha. Manje njengoba sengifunde ukuphatha ubuchwepheshe, ukuqopha kuthatha imizuzu embalwa nje, bese sinesikhathi sokubamba futhi sikhulume ngezinye izinto!
Lezi zicelo ezintathu zazintsha kimi ngo-2009. Kuyamangaza ukuthi ubuchwepheshe obusha buba yingxenye yempilo yakho ngokushesha okungakanani. Angisakwazi ukulinda ukubona engikutholayo ngonyaka ozayo!
Tags: ikheli ezimbiliukuziphendulelaingulubeAmathuluziamanothi wewebhu
Dec 25, 2009 ku-11: 44 AM
Kuyathakazelisa ukubona ukufana phakathi kwethu, Lorraine! Angikazami i-AddressTwo out okwamanje - kepha i-CRM ingaba maduze nje.
Dec 25, 2009 ngo-12: 43 PM
Bathini ngezingqondo ezinkulu?